Saamaynta Dhaqaale ee Corona Virus 2020 • Oodweynenews.com Oodweyne News | Oodweynenews.com Oodweyne News
Saamaynta Dhaqaale ee Corona Virus 2020
Saddexdii bilood ee u dambeeyay dunida, sayladaha saamiyadda adduunka (World stock markat), dhaqaalaha caalamka (Global economy), iyo ganacsi guud waxaa saameeyay xanuunka Korona Fayras. Khubarada dhinaca dhaqaalaha ee ka kala tirsan London Economic School, UNSW Business School, IMF, OECD, WB, ADB, AUEC, jariiradaha Independent, The Guardian, New York times, CNBC, VOA, Reuters, BBC iyo warbaahinadda Aljazeera, Arirang, CBS News, Global News, SABC, Sky News iyo Saab TV ayaa dhamaantood sheegaya in dunidu wajahayso hoos u dhac weyn oo dhaqaale (heavily decline of global economy) sababta fiditaanka Covid 19 awadeed.
Xanuunka Korona Fayras oo bishii December 2019 laga helay gobolka Hubei, magaaladiisa Wahun ee Shiinaha ayaa farabaas ku haya caafimaadkii, ganacsigii iyo dhaqaalihii. Covid 19 dunida waxa uu ku keenay saamayn xun (Bad impact) oo dhaqaale aadna u gun balaadhan. Waxa uuna ku faafay waddamo badan ilaa 192 dal sida ay diwaangalisay ha’ayadda WHO bisha March 2020. Dhibaatada caafimaad ee uu keenay waxaa wehelisa saamayn dhaqaale (Economic impact) oo adag, taasi oo adkaan doonta in dhakhso looga kabto.
Dhaqaalaha adduunka ayaa gebi ahaanba hadda ku sugan xaalad aad iyo aad u adag, hoos u dhaca dhaqaale ee soo foodsaaray waa mid raad toosa (Direct effect) ku yeeshay waddamada dunida iyo dadka ku dhaqan ba. In kastoo dadka wax odorosaa xooogoodu arkayeen saamaynta xanuunku ku yeelan karo koboca dhaqaalaha (Global Economic Growth), isku socodka iridaha badeecadaha (Channel commodities), iyo ganacsiga adduunka (Global Trade). Haddana xeeldheerayaasha dhaqaaluhu waxa ay isku raaceen khakhalka dhaqaale ee dunida soo wajahay in uu yahay kii u xumaa ee dhaca dagaalkii labaad kadib (WW2), masiibadii musalafnimo dhaqaale ee la magacbaxday Salaasadii Madoobayd (Black Tuesday) 1927-kii, burburkii dhaqaale ee la magac baxay Bisaaraddii Weynayd (The Great Depression) iyo xanuunkii SARS sidii uu 2003-dii raadka u yeeshay, markii uu fayraska ku dhacay Shiinaha. Shiinaha markii fayraska SARS ku dhuftay GDP-giisu wuxuu ahaa $1.6T, khasaare dhan $40B ayuu SARS, shiinaha gaadhsiiyay. Maanta Shiinuhu wuxuu fadhiyaa qiyaastii $16T. 2017 Shiinaha GDP-giisu waxa uu ahaa $12.2T, halka saami dakhi (per capital income) ee qofka shiinuhu uu ahaa $16.8K. 17sano Shiinuhu kahor dhaqaalaha kownka wuxuu ka ahaa 5%, maantana waxa uu ka badan yahay 16%.
Waxa aynu si gaara u dul istaagi saamaynta covid 19 ee suuqyadda saamiyadda adduunka, dalabka badeecadaha dunida, dalxiiska, duulimaadyadda diyaaradaha, isku socodka dadka iyo saamaynta dhaqaale ee mandaqadda Geeska Afrika ku yeelanayo.
Isku socodka dadka.
0634538873 / 0634450487